လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology: အပြုအမူ, neuroanatomical နှင့်အာရုံကြောဓာတုလေ့လာမှုများ (2008) မှတစ် ဦး ကနှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်မှု - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်
လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology: အပြုအမူ neuroanatomical နှင့် neurochemical လေ့လာမှုများမှတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်နည်း (2008)
comp ထဲကဓာတုပစ်စညျး Physiol ကို C Toxicol Pharmacol ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC နိုဝင်ဘာ 1, 2009 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
comp ထဲကဓာတုပစ်စညျး Physiol ကို C Toxicol Pharmacol ။ နိုဝင်ဘာ 2008; 148 (4): 401-410 ။
မတ်လ 2, 2008 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.cbpc.2008.02.004
Kimberly အေလူငယ်, yan လျူနှင့် Zuoxin ဝမ်
လူကြီးအတွက်လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလူ့ကျန်းမာရေးတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏အခြေခံ neurobiology စုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများရှားပါးလာပြီ။ Microtine ကြွက် pair တစုံဘွန်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အပြုအမူတွေများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များစူးစမ်းလေ့လာမယ့်ထူးခြားတဲ့နှိုင်းယှဉ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ကိုဆက်ကပ်။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့်အခြားဆက်စပ်မျိုးစိတ်ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကိုမကြာသေးမီကလူမှုရေးပူးတွဲမှု၏, neuroanatomical neurobiological နှင့် neurochemical ကျောထောက်နောက်ခံသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ပူဇျောပါပွီ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ဓာတ်ခွဲခန်း၌မိမိတို့သဘာဝအလျောက်သမိုင်းနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းဖြင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများအတွက် microtine ကြွက်များ၏ utility ကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ ကျနော်တို့ထို့နောက် pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် vasopressin, oxytocin နှင့် dopamine implicating ဒေတာအကျဉ်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ neurochemical စနစ်များသည်ဤရှုပ်ထွေးအပြုအမူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြန်အလှန်ရသောအတွက်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
keywords: Dopamine, မယား, oxytocin, pair တစုံဘွန်း, မိတ်ဖက် preference ကို, ရွေးချယ်ကျူးကျော်, vasopressin, voles
လူမှုအပြုအမူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိရိစ္ဆာန်နိုငျငံတျောသညျတလျှောက်လုံး, ဒီဂရီအမျိုးမျိုးအတွက်ပြသနေသည်အကြားရှုပ်ထွေး interaction ကပါဝငျသညျ။ မိတ်လိုက်နှင့်ကျူးကျော်ဥပမာ, လူကြီးများနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်၏ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှုအကြားခိုင်မာတဲ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းယေဘုယျအားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင် monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာများ, နောကျလိုကျမျိုးစိတ်အားဖြင့်ပြသနေစဉ်, လူထုကိုဘဝမဟာဗျူဟာများပြသကြောင်းမျိုးစိတ်မှဘုံဖြစ်ကြသည်။ ခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်ဦးချင်းစီသုခချမ်းသာမှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, လူသားအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, ပြုပါရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် schizophrenia အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း, (တစ်အဖြေရှာတဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်Volkmar, 2001) ။ အဆိုပါ neurobiology နောက်ခံလူမှုရေးစဘွန်း၏လေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သောရောဂါ၏အကြောင်းတရားများနှင့်ကုသမှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။
အမျိုးမျိုးသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမိတ်လိုက်, မိခင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျူးကျော် (အပါအဝင်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်မှနေရာအနှံ့လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုလေ့လာမှတီထွင်ခဲ့ကြပေမယ့်Seay et al ။ , 1962; Coe et al ။ , 1978; Kendrick et al ။ , 1992; နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2001; Weller et al ။ , 2003; Levy et al ။ , 2004; Moriceau et al ။ , 2005; Hull et al ။ , 2006; Hull et al ။ , 2007; နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2007), မိတ်လိုက်အားလုံးအတွက် (pair တစုံ Bond), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်ဖက် Guard (ရွေးချယ်ကျူးကျော်) နှင့်အဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ်ထိုအငွေချေးစာချုပ်များနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေအကြားခိုင်မာတဲ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဖြစ်ကောင်းကြောင့်သင့်လျော်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏မရှိခြင်း, understudied ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေတိရစ္ဆာန်နိုငျငံတျော၌အတော်လေးဆန်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်သာ (monogamous ဖြစ်ကြောင်းမျိုးစိတ်များ၏ 3-5% အားဖြင့်ပြသထားပါသည်Kleiman, 1977) ။ အဆိုပါ genus ထံမှမကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကြွက် Microtus ဤအလျော့နည်းဘုံလူမှုရေးအပြုအမူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံ neurobiological ယန္တရားများစူးစမ်းဖို့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ပါပြီ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အာရုံစိုက်လေ့လာရေး (Microtus ochrogaster) နှင့်အခြားဆက်စပ် vole မျိုးစိတ်ဟာဟော်မုန်း, pair တစုံဘွန်း၏ neuroanatomical, neurochemical, ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးစည်းမျဉ်း, ရွေးချယ်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အဖေဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ပူဇျောပါပွီ။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငါတို့သည်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးဦးမည် Microtus ကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများအတွက်သူတို့ရဲ့အလားအလာအသုံးပြုမှုကိုဆွေးနွေးပါ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်လူမှုရေးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်မည်သို့မည်ပုံဒီတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုသည်ကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ pair တစုံဘွန်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုအခြေခံအချို့သောအရေးကြီးသောဗဟိုယန္တရားများ elucidated သော neuroanatomical နှင့် neurochemical လေ့လာမှုများဆှေးနှေးပါမညျ။
2 ။ အဆိုပါ Microtus နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများအဘို့ကြွက်
အဆိုပါ genus Microtus အနီးကပ် taxonomic ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမျှဝေပေမယ့်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးမှာအတော်လေးသိသိသာသာကွာခြားကြောင်း vole မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မတူကွဲပြားဘဝမဟာဗျူဟာနှင့်အတူ coupled ဒါက phylogenetic တူ, လူမှုရေးအပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများအတွက်ဤကြွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles (အမ် pinetorum) (မြင့်မား Affiliate များမှာပုံ 1Aအဖော်ရှာပြီးနောက်အမြဲတည်သောခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်း), monogamous ကြွက် (Fitzgerald et al ။ , 1983; Getz et al ။ , 1986; Carter က et al ။ , 1993) ။ နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်မှာတော့ pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတစ်အသိုက်နှင့်နေအိမ်ပိုင်နက်ဝေမျှနှင့်မိခင်နှင့်ဖခင်နှစ်ဦးစလုံး (အမျိုးအနွယ်ကိုပွုစုပြိုးထောတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပုံ 1B()Wilson က, 1982; Fitzgerald et al ။ , 1983; McGuire et al ။ , 1984; Gruder-ဒမ် et al ။ , 1985; Getz et al ။ , 1986; Oliveras et al ။ , 1986; Carter က et al ။ , 1993) ။ တနည်းအားဖြင့်မြက်ခင်း (အမ် pennsylvanicus) နှင့် montane (အမ် montanus) voles (လျော့နည်းလူမှုရေးများမှာပုံ 1Apair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်သို့မဟုတ်အဖော်ရှာပြီးနောက်အသိုက်ကိုမျှဝေမ), ကရာကြွက် (Getz, 1972; Madison, 1978; Jannett, 1980; Madison, 1980; Jannett, 1982; Insel et al ။ , 1995b; လူငယ်တို့ et al ။ , 1998) ။ အခြားအကရာနို့တိုက်သတ္တဝါများအဘို့ဘုံဖြစ်သကဲ့သို့, ဤမျိုးစိတ်များတွင်သာမိခင် (မိဘစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပါဝင်ပုံ 1B()Wilson က, 1982; McGuire et al ။ , 1984; Gruder-ဒမ် et al ။ , 1985; Oliveras et al ။ , 1986) ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအသက်တာကိုနည်းဗျူဟာများနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူရှိနေသော်လည်းအလားတူ Non-လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်ဤ vole မျိုးစိတ်သတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ ultradian စည်းချက်လှုပ်ရှားမှုအလားတူပုံစံများ, locomotor-ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူ, တူးဖော်ခြင်းနှင့်အသိုက်အဆောက်အဦး (ကိုပြသTamarin, 1985) ။ ထို့ကြောင့်, လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုသူတို့ရဲ့မျိုးစိတ်တိကျတဲ့ဘဝမဟာဗျူဟာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေကြသည်။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း vole လူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်
လူမှုရေးအပြုအမူအပြင်, vole မျိုးစိတ်ကိုလည်းအခြားအဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်မော်ဒယ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, monogamous နှင့်ကရာ voles ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းအတွက်ထူးခြားတွေ့ပါပြီ (Gutierrez et al ။ , 1989အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ၏), ပုံစံ (Shapiro et al ။ , 1991ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်နှင့်လူကြီးအတွက် neurotransmitters ၏), ဒေသဆိုင်ရာစကားရပ် (ဝမ် et al ။ , 1996b; ဝမ် et al ။ , 1997b; ဝမ် et al ။ , 1997c; ဝမ် et al ။ , 1997d; လျူ et al ။ , 2001b), Spatial စွမ်းရည် (Jacobs et al ။ , 1990), လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်-related အပြုအမူ (Shapiro et al ။ , 1990; Stowe et al ။ , 2005) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများအဘို့အ microtine ကြွက်များ၏အကြီးအ utility ကိုသရုပ်ပြပါ။
3 ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole နှင့်လူမှုရေးကို attachment
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (ဗဟိုအမရေိကနျပွညျထောငျစု၏မြက်ခင်းပြင်၌တွေ့တစ် mictrotine မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်Tamarin, 1985), ကြောင်းလေ့လူမှုရေး attachment ကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုသည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမိတ်လိုက်ပြီးနောက်ရေရှည် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်သကဲ့သို့, မွေးမြူရေးရာသီတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးအသိုက်နှင့်နေအိမ်အကွာအဝေး share မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles monogamous ဖြစ်ကြောင်းပြသနှင့်အတူတူသွားလာလေ့ရှိသည်ဟုGetz et al ။ , 1981; Tamarin, 1985; Getz et al ။ , 1986) ။ ပြီးတာနဲ့ကပ်လျက်တည်ရှိတဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကွယ်လွန်သည်အထိတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole များသောအားဖြင့်အတူတကွဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်, ပင်, ထို့နောက်ခဲ (အသစ်တစ်ခု pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းစေမည်Getz et al ။ , 1996; Pizzuto et al ။ , 1998).
ဒါဟာ (ဤတိရိစ္ဆာန်များအလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သကဲ့သို့, ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏လူမှုရေးအပြုအမူကိုလေ့လာကောင်းစွာသားကိုမွေးခြင်း, သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအတွက် monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာဖော်ပြရန်ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်လာသည်Dewsbury, 1987) ။ မယားတစျခုအမူအကျင့်လက္ခဏာ, အမျိုးအနွယ်၏ bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှု, ကောင်းစွာဒီမျိုးစိတ်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအမေနဲ့အဖေကမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သူတို့၏အမျိုးအနွယ်ကိုပွုစုပြိုးထောများတွင်ပါဝင်ရန်နှင့်ဘိုးဘေးတို့ (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုတွေ့မြင် nursing မှလွဲ. မိဘအပြုအမူအားလုံးရှုထောင့်ပြသနေသဖြင့်၎င်းတို့၏ခွေးများ၏ရှင်သန်မှုမှနှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အထောက်အကူဖြစ်စေ Dewsbury, 1985; ဝမ် et al ။ , 1996a) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ကိုစုသိမ်းနှင့်အသိုက်အဆောက်အဦများအတွက်ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်. , လေယာဉ်ပြေးလမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်တိုက်ရိုက်ငှါလာကြသည်ကိုယောဟန်, သတို့သားနှင့်ခွေးများ retrieveသောမတ်စ် et al ။ , 1979; Dewsbury, 1985; Gruder-ဒမ် et al ။ , 1985; Oliveras et al ။ , 1986).
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူပူးတွဲပါဖိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမူအကျင့်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက် (မိတ်ဖက် preference ကို) (များအတွက် preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါသည်Williams က et al ။ , 1992b; Winslow et al ။ , 1993; Insel et al ။ , 1995a) ။ ဤသည်ဦးစားပေးဆက်နွယ်မှုပထမဦးဆုံးဒေါက်တာ Sue Carter က (၏ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြု quantified နိုင်ပါသည်Williams က et al ။ , 1992b) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သုံးအခန်းထဲကစမ်းသပ်ခြင်းယန္တရားနှစ်ခုမှာတူညီအိတ်များ, တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန််တစ်ဦးချင်းစီမှဆွန်းပြွန်ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ဗဟိုလှောင်အိမ်ပါဝင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုးဆွတိရိစ္ဆာန်, အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်များနှင့်အခြားတစ်ဦး conspecific လူစိမ်းဖြစ်သောများထဲမှ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာလှောင်အိမ်သို့ tethered ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြားသောနှင့်အတူအပြန်အလှန်မရပါဘူး။ အဆိုပါဘာသာရပ်ထို့နောက်ဗဟိုလှောင်အိမ်သို့ထားရှိနှင့်သုံးနာရီဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားစမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်များအတွက်ယန္တရားလျှောက်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ် run ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်း၏အပါအဝင်ဒီယန္တရားအချို့မူကွဲ, ခုနှစ်, ဆက်သွယ်ထားသောပြွန်တစ်လျှောက်ရှိ photobeam အလင်းအာရုံခံကိရိယာဘာသာရပ်လှောင်အိမ် entries တွေကိုတစ်ခုချင်းစီလှောင်အိမ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းအတွက်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုစောင့်ကြည့်။ အကြောင်းအရာကတော့ conspecific လူစိမ်းနှင့်အတူထက်၎င်း၏အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ side-by-side အဆက်အသွယ်သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာတစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော (မိတ်လိုက်နဲ့တွဲပြီး၏ 24 နာရီအကြာတွင်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တွင်တွေ့မြင်နေသည်ပုံ 1C()Williams က et al ။ , 1992b; Winslow et al ။ , 1993; Insel et al ။ , 1995b) ။ ဒါဟာ (နေချိန်မှာမိတ်လိုက်ယေဘုယျအားဖြင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်လိုအပ်သောသွင်းစဉ်းစားကြောင်းမှတ်သားရပါမည်Winslow et al ။ , 1993; Insel et al ။ , 1995b), တစျခုလေ့လာမှု (ovariectomized အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်း၌အထီးနဲ့တိုးချဲ့တွဲပြီးကာလအတွင်းမိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းခဲ့သရုပ်ပြWilliams က et al ။ , 1992b) ။ တစ်ချိန်ကဖွဲ့စည်းခဲ့မိတ်ဖက်ဦးစားပေး,, (ပင်မိတ်ဖက်ဆက်လက်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်းအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ပြခဲ့ကြInsel et al ။ , 1995a).
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်မှု, ရန်လိုသည့်အပြုအမူကိုလည်း (မိတ်လိုက်၏ 24 နာရီအောက်ပါအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖွံ့ဖြိုးWinslow et al ။ , 1993; Insel et al ။ , 1995b; ဝမ် et al ။ , 1997a) ။ လိင်နုံအရွယ်ရောက်ပြီးသူများသောအားဖြင့်စူးစမ်း, ဒါပေမယ့်တစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောတိရိစ္ဆာန်ဆီသို့အနည်းငယ်သာတိုက်ခိုက်အပြုအမူကိုပြသနေတဲ့လိင်ကြုံတွေ့အထီးမှထုတ်ပြန်သော (က conspecific လူစိမ်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဦးမည်ကူထီးနေစဉ်Winslow et al ။ , 1993; Insel et al ။ , 1995b; ဝမ် et al ။ , 1997a; Aragona et al ။ , 2006), တစ်ဦးလိင်လက်ခံအမျိုးသမီးအပါအဝင် (ပုံ 1D()Gobrogge et al ။ , 2007) ။ ယောက်ျားကသူတို့အကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက် (သို့မျက်နှာပြု Affiliate ရှိနေဆဲအတိုင်းဤကျူးကျော်, ရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည်Winslow et al ။ , 1993; Gobrogge et al ။ , 2007), နှင့်အခြား conspecifics နှင့်အတူအနာဂတ်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးအဖြစ်အိမ်ထောင်ဖက် Guard နှင့်ပြီးသားထူထောင် pair တစုံနှောင်ကြိုးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှထင်နေသည်။ pair တစုံဘွန်းနဲ့တူရွေးချယ်ကျူးကျော်, (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အောက်ပါကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကြာတဲ့မွဲအပြုအမူဖြစ်ပါသည်Winslow et al ။ , 1993; Aragona et al ။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ, ဒီအပြုအမူဟာနေထိုင်သူကျူးကျော်စမ်းသပ်သုံးပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာသာရပ်များအချိန်များအတွက်ဘာသာရပ်ရဲ့အိမျလှောင်အိမ်ထဲမှာအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်နှင့် cohabitate ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်နေထိုင်သူကျူးကျော်စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း, အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးတဲ့ conspecific ကျူးကျော်ခြင်းဖြင့်နှင့်ကျူးကျော်ဆီသို့ဘာသာရပ်များ၏အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် quantified ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုအမူအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ကိုက်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် display တွေ, အဆုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများ, ကျက်စား, ခုခံကာကွယ်ခရီးစဉ်နှင့်ဆက်နွယ်မှု (အပါအဝင် quantified နိုင်ပါသည်Winslow et al ။ , 1993; Aragona et al ။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007) ။ ရွေးချယ်ကျူးကျော်များ၏လေ့လာရေး (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြWinslow et al ။ , 1993; Insel et al ။ , 1995b; ဝမ် et al ။ , 1997a), သို့သော်ဒီမျိုးစိတ်အမျိုးသမီးကိုလည်း (အချို့မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ကျူးကျော်ဖော်ပြရန်Getz et al ။ , 1980; Getz et al ။ , 1981).
ဒါဟာ conspecific လူစိမ်းနှိုင်းယှဉ်သည်၎င်း၏အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်အတူဘာသာရပ်ရဲ့ဦးစားပေးဆက်နွယ်မှုများကညွှန်ပြအဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အကြားမိတ်လိုက်နဲ့တွဲပြီး၏ 24 နာရီယုံကြည်စိတ်ချရသော, တစ်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ရလဒ်များကြောင့်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး (Williams က et al ။ , 1992b; Insel et al ။ , 1995a; Insel et al ။ , 1995b; Aragona et al ။ , 2003). ဆနျ့ကငျြ, မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲတွဲပြီး၏ 1-6 နာရီကဒီမျိုးစိတ်အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည် (Williams က et al ။ , 1992b; Insel et al ။ , 1995a; Insel et al ။ , 1995b; cho et al ။ , 1999) ။ ဤသည်ပါရာဒိုင်း pair တစုံဘွန်း၏ neurochemical စည်းမျဉ်းစုံစမ်းစစ်ဆေး pharmacological လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မိတ်လိုက်၏ 24 နာရီအောက်ပါမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းရန်တိရိစ္ဆာန်များ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက် neurochemical အဲဒီ receptor ရလဒ်များ၏ပိတ်ဆို့လျှင်, ဒီအဲဒီ receptor မှဝင်ရောက်ခွင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ 1-6 နာရီအတွင်း neurochemical အဲဒီ receptor ၏ pharmacological activation လူမှုရေးတွဲပြီးမိတ်ဖက်ဦးစားပေး induces လျှင်တနည်းအားဖြင့်, ဒီအဲဒီ receptor ၏ activation pair တစုံဘွန်းသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်ပါသည်။ ဒီပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအများအပြား neurochemicals (လွှတ်ပေးရန်အချက် (CRF), gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) နှင့်အချိုမှု corticotrophin, (AVP), dopamine (DA) မိုင်နိုအက်စစ် vasopressin, oxytocin (OT) အပါအဝင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လူမှုရေး Bond ်ပတ်သက်နေကြပြီWilliams က et al ။ , 1992a; Winslow et al ။ , 1993; Williams က et al ။ , 1994; Carter က et al ။ , 1995; ဝမ် et al ။ , 1998; ဝမ် et al ။ , 1999; Gingrich et al ။ , 2000; လျူ et al ။ , 2001a; Aragona et al ။ , 2003; လျူ et al ။ , 2003; Lim က et al ။ , 2004c; Curtis et al ။ , 2005b; Aragona et al ။ , 2006) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်မှာကျနော်တို့ neuropeptides AVP နှင့် OT နှင့် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် neurotransmitter DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် interaction ကအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
4 ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ Neuropeptidergic စည်းမျဉ်း
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiology စုံစမ်းစစ်ဆေးအစောပိုင်းလေ့လာမှုများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်သော့ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မိမိတို့၏လူသိများအခန်းကဏ္ဍနှစ်ခု neuropeptides AVP နှင့်ညီလေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်, AVP နှင့်အချိန်ပိုရှည်လျား (သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့က de Wied et al ။ , 1974; ဟမ်ဘာဂါ-ဘား et al ။ , 1985; ဟမ်ဘာဂါ-ဘား et al ။ , 1987; Engelmann et al ။ , 1996), နောက်ဆုံးမှာနှစ်ဦးကိုတစ်ဦးချင်းစီအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကြား Bond တွဲ (Carter က et al ။ , 1995) ။ ထို့အပြင်နှစ်ဦးစလုံး peptides (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့Argiolas et al ။ , 1988; Argiolas et al ။ , 1989; Carter က et al ။ , 1995) နှင့်မိတ်လိုက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရေးအဘို့အရေးကြီးပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ OT နှင့် AVP မိခင်နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်အကြားနှောင်ကြိုးများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လူသိများခဲ့ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ညီလေး၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေး (သိုးများတွင်မိခင်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်တွေ့ရှိထားသည်Kendrick et al ။ , 1987) နှင့်ကြွက် (Pederson et al ။ , 1979).
monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်အကြားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု vole ဦးနှောက်အတွက်ဗဟို AVP နှင့် OT စနစ်များ၏ဖြန့်ဖြူးပုံစံများထင်ရှားပါပြီ။ immunocytochemistry အသုံးပြုခြင်းနှင့် On-site ကို hybrid, AVP အပြုသဘောဆဲလ် (က, hypothalamic အရေးပါအပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများအတွက် stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယကိုတွေ့သဖြင့်, amygdala (MEA) ၏ medial နျူကလိယပါပြီBamshad et al ။ , 1993; ဝမ်, 1995; ဝမ် et al ။ , 1996b) ။ သိပ်သည်း AVP-immunoreactive (AVP-ir) အမျှင်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် habenular နျူကလိယ, ထောင့်ဖြတ်တီးဝိုင်း, BNST, medial preoptic ဧရိယာ (MPOA), နှင့် MEA (ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum (LS) တွင်လက်ရှိများမှာဝမ် et al ။ , 1996b) ။ OT အပြုသဘောဆဲလ် hypothalamic အရေးပါ, MPOA, BNST အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်တွေ့ရှိရနေကြတယ်, နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ (LH) (ဝမ် et al ။ , 1996b) ။ အခြို့သောသိမ်မွေ့မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု (ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြပေမယ့်ဝမ်, 1995; ဝမ် et al ။ , 1996b), ယေဘုယျအားဖြင့် AVP နှင့် OT အပြုသဘောဆဲလ်နှင့်၎င်းတို့၏စီမံချက်၏ဖြန့်ဖြူးပုံစံများမြင့်မားသူတို့ရဲ့လူထုကိုဘဝမဟာဗျူဟာများရှိနေသော်လည်း vole မျိုးစိတ်အကြားထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့ပုံရသည်။ ဒါဟာထပ်မံသည်ဤ neuropeptide လမ်းကြောင်း Non-monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာများအတိုင်းလိုက်နာကြောင်းကြွက်၏အခြားမျိုးစိတ်တှငျတှေ့သူတို့နှင့်အတူအချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုမျှဝေဆိုတဲ့အချက်ကိုကထောက်ခံသည်။ ကြွက်များတွင်အဖြစ် voles အတွက်ဥပမာ, AVP လမ်းကြောင်း, (de Vries et al ။ , 1990; Szot et al ။ , 1993), အ BNST နှင့် LS အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism တစ်ဦးအထင်ကြီးဒီဂရီပြသထားတယ်။ အထူးသအထီး (အမျိုးသမီးထက်ပို AVP အပြုသဘောဆဲလ်နှင့်ဤဒေသများတွင် AVP-ir စီမံကိန်း၏မြင့်မားသိပ်သည်းဆများBamshad et al ။ , 1993; ဝမ်, 1995; ဝမ် et al ။ , 1996b), နှင့်ယောက်ျားပေါင်း၌ဤ AVP စကားရပ် (testosterone ဟော်မုန်းပျံ့နှံ့နေတဲ့နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝမ် et al ။ , 1993).
အဲဒီ receptor autoradiography သုံးပြီးလေ့လာရေးနှင့် On-site ကို hybrid (ကွဲပြားခြားနားသောအသက်တာကိုနည်းဗျူဟာများအတိုင်းလိုက်နာကြောင်း voles အတွက် AVP နှင့် OT အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးမှုပုံစံများနှင့်ဒေသတွင်းသိပ်သည်းဆအတွက်သပိတ်မှောက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုကိုပြသကြInsel et al ။ , 1992a; Insel et al ။ , 1994; လူငယ်တို့ et al ။ , 1996; လူငယ်တို့ et al ။ , 1997b; Lim က et al ။ , 2004a; Smeltzer et al ။ , 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory မီးသီး, ထောင့်ဖြတ်တီးဝိုင်း, laterodorsal နှင့် paraventricular thalamus, နှင့် BNST (အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် montane voles ထက်သိပ်သည်း AVP V1a အဲဒီ receptor (V1aR) တံဆိပ်ကပ်ခြင်းသို့မဟုတ် mRNA စကားရပ်များInsel et al ။ , 1994; လူငယ်တို့ et al ။ , 1997b) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, montane voles အဆိုပါ medial prefrontal cortex (mPFC) နှင့် LS (အပါအဝင်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထက် V1aR မြင့်မားထုတိုကိန်းဂဏန်းများ 2A နှင့် B()Insel et al ။ , 1994; Smeltzer et al ။ , 2006) ။ ကြောင်း monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles ကရာ montane နေစဉ်ဦးနှောက်ထဲမှာ V1aR တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏အလားတူပုံစံကိုပြသခြင်းနှင့် voles Meadows မှတ်သားဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် V1aR ဖြန့်ဖြူးထိုသို့သောကွဲပြားခြားနားမှုသေချာပေါက်တိကျတဲ့ပေမယ့်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကမှအစားဆက်စပ်မျိုးစိတ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုနောက်ထပ်ပုံစံကိုပြသ (Insel et al ။ , 1994; ဝမ် et al ။ , 1997d; လူငယ်တို့, 1999) ။ အမှန်မှာထို V1aR ၏သိပ်သည်းတံဆိပ်ကပ် monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles ၏ ventral pallidum (VP) (၌တွေ့Insel et al ။ , 1994; Lim က et al ။ , 2004a) ကရာမြက်ခင်းများနှင့် montane voles (ဒီဒေသအတွက် binding နည်းနည်း V1aR ပြသနေစဉ်ကိန်းဂဏန်းများ 2A နှင့် B()Insel et al ။ , 1994), အ VP အတွက် V1aRs ၏ပမာဏနှင့် monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာ၏ display ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုညွှန်း။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက် AVP နှင့် OT ပါဝင်ပတ်သက်မှု
အလားတူပင်ကွဲပြားမှုကိုလည်းဖြန့်ဖြူးပုံစံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်တာကိုနည်းဗျူဟာများနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူနှင့်အတူ vole မျိုးစိတ်အတွက်အချိန်ပိုအဲဒီ receptor (OTR ကို) တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့် mRNA စကားရပ်၏ဒေသဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆမှာတွေ့ရှိရသည်။ Monogamous voles ကရာ voles အတွက်နည်းနည်းစည်းနှောင်ပြသသော NACC, PFC နှင့် BNST, ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်နဲ့ OTR ၏သိပ်သည်းဆမြင့်ပြီ (ကိန်းဂဏန်းများ 2C နဲ့ D), ကရာမျိုးစိတ်အစားတစ် LS အတွက် သာ. ကြီးမြတ် OTR ကိုသိပ်သည်းဆသည် hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယကို၎င်း, amygdala ၏ cortical နျူကလိယရှိစဉ်အခါ (Insel et al ။ , 1992b; လူငယ်တို့ et al ။ , 1996; Smeltzer et al ။ , 2006). ဒါဟာ vole ဦးနှောက်ထဲမှာ V1aR နဲ့ OTR ဖြန့်ဝေတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုလူကြီးအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းအစောပိုင်း postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းသာမကပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ် (ဝမ် et al ။ , 1997c; ဝမ် et al ။ , 1997d) ။ အဘယ်သူမျှမမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု benzodiazepene သို့မဟုတ် opiate အဲဒီ receptor တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်အဖြစ်ထို့အပြင်ဤကွဲပြားခြားနားမှု (AVP နှင့် OT စနစ်များကိုမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်Insel et al ။ , 1992a). အတူတူအဲဒီဒေတာအထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အဲဒီ receptor စကားရပ်၏ပမာဏအတွက်ကွဲပြားမှုအမူအကျင့်စရိုက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်သောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေသာဓကများကို (ကြိုးပုခက် et al ။ , 2002). voles ခုနှစ်, V1aRs နှင့် / သို့မဟုတ် OTRs ဤ differential ကိုပုံစံများဖြန့်ချိ neuropeptides မှပြောင်းလဲဦးနှောက်တုန့်ပြန်မှုများနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများအတွက်တာဝန်ခံဖြစ်နိုင်သည်။
pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးသွေးဆောင်ရသောမိတ်လိုက်နှင့်လူမှုရေးတွဲပြီး, ဗဟို AVP နှင့် / သို့မဟုတ် OT လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်ရန်တွေ့ပါပြီ။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, tAVP mRNA များ၏အရေအတွက်တိုးသွေးဆောင်အမျိုးသမီးနှင့်အတူလူမှုရေးအတွေ့အကြုံနှင့်မိတ်လိုက်၏ hree ရက် BNST အတွက်ဆဲလ်တွေတံဆိပ်ကပ် (ဝမ် et al ။ , 1994) နှင့် LS အတွက် AVP-ir အမျှင်များ၏သိပ်သည်းဆတစ်ဦးကျဆင်းခြင်း (Bamshad et al ။ , 1994) ။ အဆိုပါ LS ဖို့ BNST စီမံကိန်းတွင် AVP ဆဲလ် (အဖြစ်de Vries et al ။ , 1983) ဤဒေတာကိုအမျိုးသမီးနှင့်အတူအတှေ့အကွုံအားဖြင့်သွေးဆောင်သည့် LS တစ်ခုတိုးလာ AVP လွှတ်ပေးရေး (နဲ့အတူဆက်စပ် BNST အတွက်တိုးမြှင့် AVP ပေါင်းစပ်အကြံပြုဝမ် et al ။ , 1998) ။ ဒီ AVP လမ်းကြောင်း (၏လိင် dimorphic သဘာဝပေးထားသောBamshad et al ။ , 1993; ဝမ်, 1995; ဝမ် et al ။ , 1996b) နှင့်အမျိုးသမီး voles အတွက် AVP လှုပ်ရှားမှုအလားတူပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်း (ဝမ် et al ။ , 1994) ဤဒေတာ (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်နဲ့ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်ဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဗဟို AVP ၏အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ဆက်စပ်မှုသက်သေအထောက်အထားပေးBamshad et al ။ , 1994; ဝမ် et al ။ , 1994; ဝမ် et al ။ , 1998). အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မှာတော့အထီး chemosensory တွေကိုထိတွေ့သည့် anterior olfactory နျူကလိယအတွက် binding OTR ကိုတစ်ခုတိုးသွေးဆောင် (Witt et al ။ , 1991), လူမှုရေးအပြုအမူကိုလည်း OTRs ထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။
pair တစုံဘွန်းအပြုအမူ၏ AVP နှင့် OT စည်းမျဉ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေ neuropharmacological လေ့လာမှုများကနေလာခဲ့ပါသည်။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်ဦး V1aR ရန်၏ intracerebroventricular (icv) အုပ်ချုပ်ရေး (pair တစုံဘွန်းအတွက်ဗဟို AVP implicating, မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲ AVP သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏အုပ်ချုပ်မှုသော်လည်းမိတ်လိုက်၏ 24 နာရီအောက်ပါမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးပုံ 2E()Winslow et al ။ , 1993; cho et al ။ , 1999) ။ ဒါဟာအယူအဆနောက်ထပ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဒေတာများကထောက်ခံခဲ့သည် တစ်ဦး V1aR ရန်၏အုပ်ချုပ်မှု inhibited စဉ် AVP ၏ icv အုပ်ချုပ်ရေး, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော် facilitated (Winslow et al ။ , 1993) ။ ထို့ပြင် site ကို pair တစုံဘွန်းများအတွက်အရေးကြီးသောတစ်ခု AVP ဆားကစ်တွင်ဤဦးနှောက်ဒေသများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရည်ညွှန်းမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု AVP ၏အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ် V1aR ရန်အားဖြင့် LS သို့မဟုတ် VP အတွက် AVP ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိုင်တွယ်, (လျူ et al ။ , 2001a; Lim က et al ။ , 2004c) ။ ဒါဟာ (AVP ၏ဗဟိုထိန်းသိမ်းရေးကရာ voles ၏အပြုအမူအပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းမှတ်သားရပါမည်လူငယ်တို့ et al ။ , 1997b; လူငယ်တို့, 1999). အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, ညီလေးပြုတ်ရည်ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသို့တစ်ဦးနဲ့ OTR ရန်၏တာဟာမိတ်လိုက်သို့မဟုတ် OT ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါဒီအပြုအမူကိုပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း (ပုံ 2F), pair တစုံဘွန်းအတွက်ဗဟိုညီလေး၏လိုအပ်ချက်ကိုညွှန်း (Williams က et al ။ , 1994; Insel et al ။ , 1995a; cho et al ။ , 1999). အဆိုပါ NACC လည်းအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် NACC ပြောင်းလဲမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အချိန်ပိုခြယ်လှယ်အဖြစ် pair တစုံဘွန်း၏ OT စည်းမျဉ်းများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပြထားပြီး (လျူ et al ။ , 2003).
ညီလေးအဲဒီအမျိုးသမီးအတွက်အဓိကအားဖြင့်လေ့လာခဲ့ကြစဉ်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများမှာတော့ pair တစုံဘွန်းအပေါ် AVP ၏သက်ရောက်မှုအထီးနီးပါးသီးသန့်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ peptide နှင့်အတူလိင်၏ဤတွဲဖက်မှုဖြစ်ကောင်း (မိခင်-မွေးကင်းစကလေး Bond အတွက်ကြောင့် BNST-LS AVP လမ်းကြောင်းနှင့်ညီလေး၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏လူသိများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism နှင့် testosterone ဟော်မုန်း sensitivity ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့သည်Pederson et al ။ , 1979; de Vries et al ။ , 1983; Kendrick et al ။ , 1987; de Vries et al ။ , 1990; Kendrick et al ။ , 1992) ။ T ကHUS, AVP နှင့် OT ကျားမတိကျတဲ့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့စဉ်းစားကြသည် ဟူ. ၎င်း, AVP အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond ထိန်းညှိခြင်းနှင့် OT အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တူညီတဲ့အပြုအမူထိန်းညှိ (Winslow et al ။ , 1993; Williams က et al ။ , 1994; Insel et al ။ , 1995a). သို့သော်သတိထား pharmacological ခြယ်လှယ်မှတဆင့်သူကနောက်ပိုင်းမှာ AVP နှင့်အချိန်ပိုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်တစ်စုံ Bond အဘို့အသီးအသီးအရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ neuropeptide ၏ထိရောက်သောဆေးများလေ့လာခြင်း (အကြားကွဲပြားပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်, အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သို့ AVP သို့မဟုတ် OT ဖြစ်စေ၏ icv အုပ်ချုပ်ရေး, တွဲပြီး၏တစ်ဦးတည်းသာနာရီအကြာတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်cho et al ။ , 1999) ။ ထို့ပြင် LS သို့တစ်ဦးနဲ့ OTR ရန်၏အုပ်ချုပ်မှု (အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပိတ်ဆို့ဖို့ထိရောက်ခဲ့လျူ et al ။ , 2001a) ။ T ကAVP နှင့် OT နေဆဲ (ဥပမာ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအသီးသီး AVP နှင့် OT ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံများမှာ) pair တစုံဘွန်းအတွက်ကျားမတိကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါပေမဲ့ herefore, ကနှစ်ဦးစလုံး neuropeptides နှစ်ဦးစလုံးအထီးအတွက် pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်နှင့် အမျိုးသမီး voles ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကယခုတင်ပြသော pharmacological လေ့လာမှုများ, AVP, ညီလေး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အဲဒီ receptor agonists / ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်, ယေဘုယျအားဖြင့် AVP နှင့်ညီလေး၏ဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ, ဘာသာရပ်ရဲ့မိတ်လိုက်, လူမှုရေး interaction က, ဒါမှမဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲမပြုခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် pair တစုံဘွန်းအပြုအမူများအတွက်တိကျသော။
တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းလူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်ဘဝမဟာဗျူဟာ၏မော်လီကျူးအခြေခံဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ microtine ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက် V1aR နဲ့ OTR ၏မျိုးဗီဇအဆောက်အဦများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာရေးအဲဒီ receptor နိုင်တဲ့ coding ဒေသများတွင်အလွန်အမင်း monogamous နှင့်ကရာ voles အကြားထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုတွေ့ပြီ (လူငယ်တို့ et al ။ , 1996; လူငယ်တို့ et al ။ , 1997a; လူငယ်တို့ et al ။ , 1999) ။ သို့သော် V5aR နဲ့ OTR ဗီဇ၏ 1 '' flanking ဒေသ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလားအလာစည်းမျဉ်းဒြပ်စင် (အချို့မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုထင်ရှားလူငယ်တို့ et al ။ , 1996; လူငယ်တို့ et al ။ , 1997a; လူငယ်တို့ et al ။ , 1999) ။ အထူးသ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles ကရာမြက်ခင်းများနှင့် montane voles (ထဲမှာပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ကြောင်း V1aR ဗီဇ၏ကမကထဒေသတွင်း၌ထပ်တလဲလဲ microsatellite DNA ကိုတစ် sequence ကိုရှိလူငယ်တို့ et al ။ , 1999; ကြိုးပုခက် et al ။ , 2002; ကြိုးပုခက် et al ။ , 2004).
ဒါဟာ (ထို V1aR ကမကထဒေသများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုမျိုးဗီဇစကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်လူမှုရေးအပြုအမူတိကျတဲ့မျိုးစိတ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းတွေးဆထားသည်ကြိုးပုခက် et al ။ , 2004) ။ ဒါကစိတ်ကူး (တော်တော်များများ Transgene လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများကထောက်ခံနေသည်Pitkow et al ။ , 2001; Landgraf et al ။ , 2003; Lim က et al ။ , 2004b) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole V1aR ဗီဇကိုလက်ခံရရှိကြောင်း Transgene ကြွက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ဆင်တူပေမယ့် nontransgenic ကြွက်၏ထံမှကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ထဲမှာ V1aRs တစ်ဦးဖြန့်ဖြူးပုံစံရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်ဤအ V1aR Transgene ကြွက် (သူတို့ရဲ့ရိုင်း-type အမျိုးအစား littermates မှနှိုင်းယှဉ်လျှင် Affiliate အပြုအမူတစ်ခုတိုးနှင့်အတူ AVP ဆေးထိုးဖို့တုန့်ပြန်လူငယ်တို့ et al ။ , 1999) ။ ထို့အပြင် Affiliate အပြုအမူနှင့် facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတိုးမြှင်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ VP (ထဲတွင်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးပြုပုံ V1aR စကားရပ်တိုးလာPitkow et al ။ , 2001) ။ တစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုတစ်ခုဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုအထီးမြက်ခင်း voles ၏ VP (မှမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole V1aR လွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်Lim က et al ။ , 2004b) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကဤ Transgene မြက်ခင်း voles မသာခြင်း (VP အတွက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ကဲ့သို့ V1aR ထုပြသကိန်းဂဏန်းများ 3A-C မှာ), ဒါပေမယ့်လည်းတိုးမြှင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပြသ (ပုံ 3Dတစ်ဦး monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာ၏), တစ်ဦးရိုဝိသေသ (Lim က et al ။ , 2004b) ။ ဒါဟာသို့သော်တစ်ယောက်တည်း V1aR မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အပြောင်းအလဲလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကဆုံးဖြတ်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ပါ, သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုသည်အခြား nonmonogamous vole မျိုးစိတ်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောကြွက်မျိုးစိတ်ကိုလည်း (monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles ၏ဆင်တူထပ်တလဲလဲ microsatellite ပာအတူ V1aR ကမကထဒေသများ feature တွေ့ရှိခဲ့က Fink et al ။ , 2006). ဒါဟာမကြာသေးခင်ကတွေ့ရှိချက် pair တစုံဘွန်းနှင့်မျိုးစုံ neurochemical စနစ်များသည်ဤအပြုအမူကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေ၏ရှုပ်ထွေးမီးမောင်းထိုးပြ။ အမှန်မှာအထက်ပါဖော်ပြထားတဲ့ Transgene မြက်ခင်း voles (က dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်မပြုခဲ့Lim က et al ။ , 2004b), နောက်ထပ် V1aR ဗီဇလွှဲပြောင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများဖြစ်သော mesolimbic dopamine သည့်စနစ်ကဲ့သို့သောအခြား neurochemical စနစ်များ, နှင့်အတူဤဗီဇများ၏အပြန်အလှန်မှီခိုအားကိုးခြင်းအလိုငှါညွှန်ပြ။
5 ။ အမှန်ပင်လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ Dopaminergic စည်းမျဉ်း
ဗဟို dopamine (DA) olfaction, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, သင်ယူမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်အေးစက်အပါအဝင် pair တစုံဘွန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ key ကိုသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အများစုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍလျှင်အားလုံးမဟုတ် (Mitchell က et al ။ , 1992; Cheng et al ။ , 2003; Hull et al ။ , 2004; Hull et al ။ , 2006; သံပုရာ et al ။ , 2006; Tillerson et al ။ , 2006; el-Ghundi et al ။ , 2007) ။ DA, အထူးသဖြင့် mesolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လည်း (သဘာဝဆုလာဘ်အမျိုးမျိုး၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးငါသည်ပညာရှိ၏ဟု et al ။ , 1989; Bozarth, 1991) (အဖော်ရှာအပါအဝင်Everitt, 1990) အရာ (pair တစုံဘွန်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်Carter က et al ။ , 1990; Williams က et al ။ , 1992b; Insel et al ။ , 1995b; Curtis et al ။ , 2003a; ဝမ် et al ။ , 2004) ။ ဤအကြောင်းများကြောင့် DA pair တစုံဘွန်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆခဲ့သည်နှင့်လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ DAergic စည်းမျဉ်းကတည်းကလယ်ပြင်၏အရေးပါသောအာရုံစိုက်ဖြစ်လာသည်။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဦးနှောက်ထဲမှာ DA ဆဲလ်များနှင့်ပရောဂျက်၏ဖြန့်ဖြူးအမျိုးမျိုးသော immunocytochemical လေ့လာမှုများအားဖြင့်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာ tyrosine hydroxylase (TH), catecholamines ပေါင်းစပ်အတွက်အင်ဇိုင်းကန့်သတ်နှုန်းများအတွက်တံဆိပ်များပါလျှင်တစ်ဦးကဆဲလ် dopamine beta ကို hydroxylase (DBH), norepinephrine မှ DA ပြောင်းပေးသောအင်ဇိုင်းများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏မရှိခြင်းအတွက် DAergic ဖြစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း, လေ့လာမှုများ DAergic ဆဲလ်တွေအများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများအတွက် BNST, MPOA, ventral tegmental ဧရိယာ (VTA), MEA နှင့် LH (အပါအဝင် Bond တွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းပြသကြAragona, 2004; Gobrogge et al ။ , 2007; Northcutt et al ။ , 2007) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ NACC, caudate putamen (က CP) နှင့် TH နှင့်ဤဒေသများအတွက်သိပ်သည်း DA ဆိပ်ကမ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြသည့် dopamine Transporter (DAT), (နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ olfactory tubercle ပြပွဲပြင်းထန်သောအစွန်းအထင်းAragona et al ။ , 2003).
နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ presynaptic DA ဖြန့်ဖြူးပုံစံများယေဘုယျအား monogamous နှင့်ကရာ voles အကြားဆင်တူပေမယ့်ကြောင်းပြသကြ (လျူ et al ။ , prep ထဲမှာ), ဆဲလ်သိပ်သည်းဆအချို့မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုတည်ရှိ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မြက်ခင်း voles ထက် BNST နှင့် MEA အတွက် TH-immunoreactive (TH-ir) ဆဲလ်၏အရည်အသွေးသိပ်သည်းတံဆိပ်ကပ်ခြင်းရှိသည်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည် (Northcutt et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားအတူတူပင်ဆဲလ်သူတို့ DAergic ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ DBH တံဆိပ်ကပ်ဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ chemosensory တွေကို processing နှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (အတွင်း pair တစုံဘွန်းနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုဖြန်ဖြေအတွက် BNST နှင့် MEA function ကိုအမျှပက်ထရစ် et al ။ , 1994; ဝမ် et al ။ , 1994; ဝမ်, 1995; Curtis et al ။ , 2003b), t ကိုhese ဒေတာအရေးကြီးသောမျိုးစိတ်များကိုလူမှုအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆက်စပ် DAergic ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တိကျတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြသည်။
ထို့အပြင်ကွဲပြားခြားနားမှုမြက်ခင်းများနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကြား DA အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆမှာတွေ့ရှိပြီ. DA receptors နှစ်ခုအဓိကမိသားစုများ, D1 ကဲ့သို့ receptors (D1Rs) နှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors (D2Rs) သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမြက်ခင်းများနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, D1Rs နှင့် D2Rs အဆိုပါ NACC, က CP, mPFC နှင့် amygdala အတွက်ပစ္စုပ္ပန်နှင့် D2Rs ဖြစ်ကြ၏ substantia nigra နှင့် VTA တွင်လည်းပစ္စုပ္ပန်များမှာ (Aragona et al ။ , 2003; လျူ et al ။ , prep ထဲမှာ). While အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး၏ဤပုံစံမြက်ခင်းများနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကြားအလားတူဖြစ်ပါသည်, အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုတည်ရှိ။ အထီးမြက်ခင်း voles မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဆိုပါ mPFC အတွက် binding ပိုပြီး D1R ရှိနေစဉ်, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လုပ်ပေးထက် D2R အဆိုပါ NACC နှင့် mPFC အတွင်း binding သိသိသာသာပိုရှိသည် (Aragona et al ။ , 2006; Smeltzer et al ။ , 2006). တိကျတဲ့ DA အဲဒီ receptor Subtype ၏သိပ်သည်းဆတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအပြုအမူအပေါ်ဖြန့်ချိ DA နှင့်သက်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုမှဦးနှောက်တုန့်ပြန်ပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်အထီးမြက်ခင်း voles ၏ NACC အတွက် D1Rs ၏အဆင့်မြင့် voles prairie ၎င်းတို့၏ယုတ်လျော့လူမှုရေးအပြုအမူဆွေမျိုးများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်တွေ့ရှိထားပြီး (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) (Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006).
မိတ်လိုက် (pair တစုံဘွန်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်Carter က et al ။ , 1990; Williams က et al ။ , 1992b; Insel et al ။ , 1995b; ဝမ် et al ။ , 2004) နှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ NACC (ထဲမှာ DA လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးGingrich et al ။ , 2000; Aragona et al ။ , 2003; Curtis et al ။ , 2003a) ။ ထို့ကြောင့် DA pair တစုံဘွန်းအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် Pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ ဥပမာ, မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက် nonspecific DA အဲဒီ receptor agonist သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏အရံဆေးထိုး, တစ်ဦး nonspecific DA အဲဒီ receptor ရန်၏ဆေးထိုးပိတ်ဆို့နေချိန်တွင်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး (ပုံ 4A()ဝမ် et al ။ , 1999; Aragona et al ။ , 2003) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (DA မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းညွှန်ပြဝမ် et al ။ , 1999; Aragona et al ။ , 2003). ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့လာရေး pair တစုံဘွန်း၏ DA စည်းမျဉ်း receptor- နှင့် site တိကျတဲ့နှစ်ဦးစလုံးကြောင်းကိုညွှန်ပြ. အဆိုပါ NACC အတွက် D2Rs ၏ပိတ်ဆို့ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း inhibited သော်လည်းဥပမာအားဖြင့်, D1Rs ၏ activation, ဒါပေမယ့်မရ D2Rs, အ NACC အတွက်မဟုတ်က CP, အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း facilitated (ပုံ 4B()Gingrich et al ။ , 2000; Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006). တစ်ခုခုကိုမိတ်လိုက်နေဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ NACC ပိတ်ဆို့မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသို့ D1R agonist ၏ထို့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေး (ပုံ 4C) သို့မဟုတ် D2R activation အားဖြင့် (Aragona et al ။ , 2006). ဤရွေ့ကားဒေတာ D2R activation နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့် D1R activation မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ထိုကဲ့သို့သော pair တစုံဘွန်းအပေါ် NACC DA receptors တစ်ခုဆန့်ကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Further, pair တစုံဘွန်း၏ DA စည်းမျဉ်းကတော့ NACC shell ကိုအတွက် D2Rs ၏ activation သကဲ့သို့, NACC အတွင်း Sub-ဒေသတိကျတဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မ core ကို, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း induces (Aragona et al ။ , 2006). စိတ်ဝင်စားစရာကဒီ receptor- နှင့်ဒေသတိကျတဲ့ DA စည်းမျဉ်းလည်းထိုကဲ့သို့သောသုတ်ရည်ထိနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူကဲ့သို့အခြားအပြုအမူတွေ, ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လူသိများခဲ့ပြီး (Hull et al ။ , 1992; ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996; ဂရေဟမ် et al ။ , 2007).
အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ DA စည်းမျဉ်း
pair တစုံဘွန်း၏ receptor တိကျတဲ့ DA စည်းမျဉ်းကိုထပ်မံတစ် DA အဲဒီ receptor အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ် pharmacological လေ့လာမှုကနေမကြာသေးမီကဒေတာများကထောက်ခံသည်။ D1Rs နှင့် D2Rs (အတိုက်အခံသူတို့ရဲ့ alpha မှာ G-ပရိုတိန်း subunits မှတဆင့်သိသိ adenosine3'5'- monophosphate (Camp) intracellular အချက်ပြ modulate ကြောင်း, G-ပရိုတိန်း coupled receptors များမှာMissale et al ။ , 1998; Neve et al ။ , 2004) ။ D1Rs တစ်စခန်းဖွဲ့စည်းရေးအတွက်တိုး, Camp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase (PKA) phosphorylation နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆဲလ် activation အလျှော့ပေးလိုက်လျော, activated သည့်အခါ adenylate cyclase (AC) လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်း stimulatory alpha subunits နှင့်အတူ, G-ပရိုတိန်းမှ coupled နေကြသည်။ တနည်းအား D2Rs inhibitory alpha subunits နှင့်အတူ, G-ပရိုတိန်းမှ coupled နေကြသည်။ D2Rs အားဖြင့် activated သည့်အခါဤ subunits AC အလှုပ်ရှားမှု, စခန်းအဆင့်ဆင့်, PKA activation, နောက်ဆုံးမှာ Post-Synaptic ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျသွားသည်။ လတ်တလောလေ့လာမှုမှာ NACC shell ကိုအတွက် stimulatory, G-ပရိုတိန်းသို့မဟုတ် PKA လှုပ်ရှားမှု activation (မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးAragona et al ။ , 2007D1Rs သူတို့ကိုယ်သူတို့ activated ခဲ့ကြသည်အခါ), တူညီတဲ့အပြုအမူရလဒ် (လေ့လာတွေ့ရှိAragona et al ။ , 2006) ။ ဆနျ့ကငျြ, (ထိုသို့သောအားဖြင့် D2R activation ၏မော်လီကျူးသက်ရောက်မှုန်းမှာ, အ NACC shell ကိုအတွက်သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းစခန်းအချက်ပြလျော့ကျလာAragona et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ D1Rs နှင့် D2Rs အတိုက်အခံ pair တစုံဘွန်းထိန်းညှိသောပထမဦးဆုံး intracellular သက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ DA သာမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အရေးပါဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်စုံနှောင်ကြိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (Aragona et al ။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007) ။ အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မှထုတ်ပြန်သော (ကျွမ်းတဝင်မရှိသောကျူးကျော်သူတွေကတိုက်ခိုက်ဖို့နှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ဖယ်ရှားနေသည်လျှင်ပင်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ပယ်ချWinslow et al ။ , 1993; Pizzuto et al ။ , 1998; Aragona et al ။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007). ဒါကရွေးချယ်ကျူးကျော်အားဖြင့်ကနဦးတဦးတည်းထိန်းသိမ်းတစ်စက္ကန့် pair တစုံနှောင်ကြိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာ AVP ဒီအပြုအမူများအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းလူသိများသည် (Winslow et al ။ , 1993). သို့သော်မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကို DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပါတယ် (Aragona et al ။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007). အထူးသ pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လိင်နုံမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထက် NACC အတွက် binding သိသိသာသာပိုပြီး D1R ပြသ (ကိန်းဂဏန်းများ 4D နှင့် E) ။ T ကမိမိအ accumbal ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအမျိုးသမီးထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်မှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစား Bond တွဲဖို့တိကျတဲ့ဖြစ်ပါသည် (Aragona et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ NACC အတွက် D1Rs D1Rs ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ပိတ်ဆို့အဖြစ် pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ရွေးချယ်ကျူးကျော်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေ့သော်လည်းမ D2Rs, (အပြုအမူ abolishes ပြီပုံ 4F()Aragona et al ။ , 2006). ထို့ကြောင့်, pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက် NACC D1Rs များ၏အရေအတွက်တိုး pair တစုံနှောင်ကြိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ (voles prairie မှနှိုင်းယှဉ်အတွက်, ကရာအထီးမြက်ခင်း voles အဆိုပါ NACC အတွက် D1Rs တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား Basal အဆင့်အထိရှိသည်, ဤယူဆချက်ကိုထောက်ပံ့နှင့်တိုးမြှင့် Affiliate အပြုအမူတွင်ဤ receptors ရလဒ်များပိတ်ဆို့ပါပြီAragona et al ။ , 2006).
6 ။ pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် Neurochemical interaction က
ထိုကဲ့သို့သော pair တစုံ Bond အဖြစ်ရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအပြုအမူတွေ, ဇီဝကမ္မသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုရှုထောင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်အများအပြား neurotransmitter စနစ်များလူမှုရေးအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်တွင်တင်ပြအဆိုပါဒေတာများကို pair တစုံဘွန်းအတွက်သုံးသီးခြား neurochemical စနစ်များ, AVP, ညီလေးနှင့် DA ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဤစနစ်များ pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အပြန်အလှန်။ ထို့အပွငျ corticotropin လွှတ်ပေးရန်အချက်, ဂါဘမြို့သားများနှင့်အချိုမှုအပါအဝင်အခြားအ neurochemicals လည်း pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။
ပထမဦးဆုံး neurochemical interaction ကတစျခုမှာ AVP နှင့် OT ပါဝင်ပတ်သက် pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်မှတ်ချက်ချသည်။ AVP သို့မဟုတ် OT ဖြစ်စေ၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း facilitated နေစဉ်, ဖြစ်စေ neuropeptide အဲဒီ receptor ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (AVP သို့မဟုတ် OT ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးတားစီးဖို့ထိရောက်ခဲ့cho et al ။ , 1999) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ AVP နှင့် OT pair တစုံဘွန်းပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြန်အလှန်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ AVP နှင့် OT ဆဲလ်နှင့်၎င်းတို့၏ receptors ကို (LS အပါအဝင်အများအပြား vole ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ထပ်Insel et al ။ , 1992a; Insel et al ။ , 1994; ဝမ် et al ။ , 1996b) ။ တကယ်တော့တိုက်ရိုက် LS သို့ AVP ၏ site ကိုတိကျသောအုပ်ချုပ်ရေးဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်, ဤအပြုအမူတစ်ခု V1aR ရန်သို့မဟုတ် OTR ကိုရန်နှင့်အတူ AVP ၏တစ်ပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် inhibited ခဲ့သည် (လျူ et al ။ , 2001a) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဟာ LS အတွက် AVP နှင့်အချိန်ပိုနှစ်ဦးစလုံး receptors မှဝင်ရောက်ခွင့် pair တစုံဘွန်းများအတွက်အရေးကြီးပါသည်နှင့်ဤနှစ်ခု neuropeptides ဒီလူမှုရေးအပြုအမူများ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်စေခြင်းငှါကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
AVP နှင့်ညီလေးကိုလည်း pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် DA နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်တွေ့ပါပြီ။ D2R activation အားဖြင့်သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးပိတ်ဆို့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် OTR ကိုရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC အုပ်ချုပ်ရေး (လျူ et al ။ , 2003). တူညီသောလေ့လာမှုမှာ NACC အတွက် D2Rs ၏ပိတ်ဆို့ OT အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးတားဆီး (လျူ et al ။ , 2003) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကဒီဒေသအတွက်အချိန်ပိုနှင့် D2Rs ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation pair တစုံဘွန်းများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုအတွက်ကြောင့် D1R ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC အုပ်ချုပ်ရေး OT သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး (ပိတ်ဆို့မရှာတွေ့ခဲ့သည်လျူ et al ။ , 2003), ရလဒ် D2R အားဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေနှင့်ကိုက်ညီပေမယ့် NACC အတွက် activation D1R မဟုတ် (Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006). လေ့လာရေးကိုလည်း AVP နှင့် DA pair တစုံဘွန်းပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြန်အလှန်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ VP သို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole V1aR ဗီဇ၏ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုလွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိကြောင်းအထီးမြက်ခင်း voles ((သဘာဝကျကျမြက်ခင်း voles အတွက်ပေါ်ပေါက်မဟုတ်ဘူး) ကိုသွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအဖော်ရှာလိုက်ပါတစ်ဦးတိုးပွားလာဒေသတိကျတဲ့ V1aR စကားရပ်ပြသLim က et al ။ , 2004b) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ဦး D2R ရန်၏အုပ်ချုပ်မှု DA နှင့် AVP pair တစုံဘွန်းအပြုအမူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အပြန်အလှန်ကြောင်းညွှန်ပြ, ဒီဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖျက်သိမ်း (Lim က et al ။ , 2004b) ။ DA နှင့် AVP အဆိုပါ VP အတွက်အပြန်အလှန်သောစိတ်ကူးလက်ရှိစာပေနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤဒေသ (V1aRs နှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်ကိုInsel et al ။ , 1994), မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ AVP ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ (Pitkow et al ။ , 2001; Lim က et al ။ , 2004b), နှင့် accumbal output ကိုအများစုအားလက်ခံတွေ့ဆုံ (Heimer et al ။ , 1991).
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် NACC (ထို VTA ထံမှ DAergic စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံSwanson, 1982) ။ အဆိုပါ VTA အတွက်အချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားထို့ကြောင့် DAergic ဆဲလ်များ၏လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲနှင့်အရှင် NACC အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်လွှမ်းမိုးနိုင်သည် (ရှီ et al ။ , 1998; Takahata et al ။ , 2000). စိတ်ဝင်စားစရာ, အ VTA အတွက် AMPA-type အမျိုးအစားအချိုမှု receptors သို့မဟုတ်ဂိဗာမွို့ receptors ဖြစ်စေ၏ပိတ်ဆို့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း induces (Curtis et al ။ , 2005a), pair တစုံဘွန်းအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ဂါဘမြို့သား, အချိုမှုများနှင့် DA အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကြံပြု။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကဤ interaction က၏တိကျသောသဘောသဘာဝကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, microtine ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏ neurobiology စူးစမ်းလေ့လာမယ့်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်အထူးသဖြင့်, အရွယ်ရောက်လူမှုရေး attachment များကိုများ၏လေ့လာမှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေဝယ်ယူသတင်းအချက်အလက်ကိုအလွန်ယခင်ကကြောင့်ထိုကဲ့သို့အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် schizophrenia အဖြစ်သင့်လျော်သောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတစ်မရှိခြင်းလေ့လာရန်ခက်ခဲခဲ့ကြပြီလူ့မမှန်အခြေခံသည့်ယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (ဤရောဂါ၏အဓိကရောဂါရှာဖွေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်Volkmar, 2001) ။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေမကြာသေးခင်ကဒေတာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏လေ့လာမှုမှာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်တစ်ဦးဆန်းသစ်အသုံးပြုမှုကိုညွှန်ပြ, အပြန်အလှန်စေခြင်းငှါ။ ပြတော်မူပြီ ဒါဟာ microtine ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးဆက်လက်သုတေသနနောက်ထပ်လူသားတွေအတွက်ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
ကျနော်တို့ကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရေးပါစာဖတ်ခြင်းအဘို့အ Kyle Gobrogge နှင့်ကလော်ဒီယာ Lieberwirth ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းကိန်းဂဏန်းများပြင်ဆင်နေ၌သူ၏အထောကျအကူအကူအညီများအတွက်ယောဟနျသ Chalcraft ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ZW မှ DAR01-19627, DAK02-23048 နှင့် MHR01-58616 ပေးအပ်ကထောက်ခံခဲ့သည်။
*တရုတ်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒအပေါ် CBP ၏အထူးပြဿနာမှအလှူငွေမှာတင်ဆက်သို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်ဝိသဗေဒ၏နိုင်ငံတကာညီလာခံနှင့်6နှင့်ဆက်စပ်သောth တရုတ်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒညီလာခံ, အောက်တိုဘာ, 10-14, 2007, Zhejiang တက္ကသိုလ်, ဟန်ကျိုး, တရုတ်။
Aragona BJ ။ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ် (Ph.D ဘွဲ့ကိုစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း) Tallahassee, FL: 2004 ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ Dopamine စည်းမျဉ်း။
နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 3483-3490 ။ [PubMed]
Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, Curtis JT, Detwiler JM, Insel TR, ဝမ် Z. နျူကလိယ differential dopamine accumbens monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 133-139 ။ [PubMed]
နျူကလီးယပ်အတွင်းစခန်းအချက်ပြခြင်းဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစည်းမျဉ်းအတိုက်အခံ Aragona BJ, ဝမ် Z. shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 13352-13356 ။ [PubMed]
အထီး copulatory အပြုအမူ၏ Argiolas A, Collu M, D'Aquila P ကို, Gessa GL, Melis MR, Serra G. အ Apomorphine ဆွကြွက်များတွင် oxytocin ရန်သူd(CH2)5Tyr (Me) -Orn8-vasotocin အားဖြင့်တားဆီးထားသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1989; 33: 81-83 ။ [PubMed]
Argiolas တစ်ဦးက, Melis MR, Gessa GL ။ ဟနေခြင်းနှင့် penine စိုက်ထူ: ဗဟို dopamine-oxytocin-adrenocorticotropin ကွန်နက်ရှင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1988; 525: 330-337 ။ [PubMed]
Bamshad M က, Novak MA, De Vries GJ ။ လိင်နုံများနှင့်မိဘ၏မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, Microtus ochrogaster နှင့်မြက်ခင်း voles ၏ vasopressin innervation အတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု, Microtus pennsylvanicus ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1993; 5: 247-255 ။ [PubMed]
Bamshad M က, Novak MA, က de Vries GJ ။ တွဲပြီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် vasopressin innervation နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့် (Microtus ochrogaster) Physiol ပြုမူနေပွောငျးလဲ။ 1994; 56: 751-758 ။ [PubMed]
Bozarth MA ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူ။ နယူးယောက်: John Wiley & Sons; 1991 ။
Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1995; 19: 303-314 ။ [PubMed]
Carter က CS, Getz ll ။ မယားနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ။ သိပ္ပံ Am ။ 1993; 268: 100-106 ။ [PubMed]
Carter က CS, Williams က JR, Witt DM ။ တစ်ဦး monogamous နို့တိုက်သတ္တဝါအတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏ဇီဝဗေဒ။ ခုနှစ်တွင်: Balthazart J ကို, အယ်ဒီတာ။ ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ ဘေဆယ်: Karger; 1990 ။ စစ။ 154-164 ။
Cheng JJ, က de Bruin JP, Feenstra MG ။ နျူကလိယအတွက် Dopamine efflux ဂန္ထဝင်အေးစက် appetitive တုံ့ပြန် shell ကိုနှင့်အဓိက accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 1306-1314 ။ [PubMed]
cho ဟာ MM, DeVries AC အ, Williams က JR, Carter က CS ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးအပေါ် oxytocin နှင့် vasopressin ၏ဆိုးကျိုးများ (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113: 1071-1079 ။ [PubMed]
Coe CL, Mendoza SP, Smotherman WP, ထိုရှဉ့မျောက်အတွက် Levine အက်စ်မိခင်-မွေးကင်းစကလေးကို attachment: ခွဲခြာမှ adrenal တုံ့ပြန်မှု။ ပြုမူနေ Biol ။ 1978; 22: 256-263 ။ [PubMed]
Curtis JT, Stowe JR, လူမှုရေးနှင့် Non-လူမှုရေး voles အတွက် striatal dopamine system ပေါ်တွင် intraspecific interaction က၏ဝမ် Z. Differential ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2003a; 118: 1165-1173 ။ [PubMed]
Curtis JT အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) Physiol ပြုမူနေအတွက် Bond တွဲဖို့အထောက်အကူအခြေအနေများအောက်တွင်ဝမ် Z. Forebrain က c-fos စကားရပ်။ 2003b; 80: 95-101 ။ [PubMed]
Curtis JT အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Glucocorticoid အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု: ဗဟို dopamine ဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်အတူစူးရှပိတ်ဆို့ထားခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်၏ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2005a; 134: 369-376 ။ [PubMed]
Curtis JT, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Ventral tegmental ဧရိယာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005b; 86: 338-346 ။ [PubMed]
de Vries GJ al-Shamma HA ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ vasopressin လမ်းကြောင်း၏ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ J ကို Neurobiol ။ 1990; 21: 686-693 ။ [PubMed]
de Vries GJ, အကောင်းဆုံး W က, Sluiter AA ကို။ ကြွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum ၏ vasopressinergic innervation အတွက်လိင်ခြားနားချက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1983; 284: 377-380 ။ [PubMed]
က de Wied: D, ဗန် Wimersma Greidanus တီဘီ, Bohus ခအဆိုပါကြွက် supraoptic-neurohypophyseal စနစ်နှင့်အပြုအမူ: မှတ်ဥာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် vasopressin ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Probl Actuels Endocrinol Nutr စီးရီးအေ။ 1974; 18: 323-328 ။ [PubMed]
Dewsbury DA ။ ကြွက်များတွင်မိဘအပြုအမူ။ နံနက် Zool ။ 1985; 25: 841-852 ။
Dewsbury DA ။ မယား၏နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ။ Nebr Symp Motivation ။ 1987; 35: 1-50 ။ [PubMed]
El-Ghundi M၊ O'Dowd BF, George SR ။ သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင် dopamine receptor စနစ်များ၏အခန်းကဏ္intoကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း။ Rev Neurosci 2007; 18: 37-66 ။ [PubMed]
Engelmann M က, Wotjak မှန် CT, နျူမန်ငါက Ludwig M က, intracerebral vasopressin နဲ့ oxytocin ၏ Landgraf R. အပြုအမူအကျိုးဆက်များ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1996; 20: 341-358 ။ [PubMed]
Everitt BJ ။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အထီးကြွက်များ၏အစာစားချင်စိတ်များနှင့် copulatory တုံ့ပြန်မှုအခြေခံသည့်ယန္တယားတစ်ခုအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1990; 14: 217-232 ။ [PubMed]
က Fink က S, Excoffier L ကို, Heckel G. အနို့တိုက်သတ္တဝါတွေကစျမယားတစ်ခုတည်းဗီဇကထိန်းချုပ်ထားသည်မဟုတ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2006; 103: 10956-10960 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fitzgerald RW, Madison DM ။ ထင်းရှူး voles, Microtus pinetorum တစ်ဦးအခမဲ့-အထိလူဦးရေရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1983; 13: 183-187 ။
Getz ll ။ Microtus pennsylvanicus ၏လူဦးရေအတွက်လူမှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ။ J ကို Mammol ။ 1972; 53: 310-317 ။
Getz ll, Carter က CS ။ Microtus ocrogaster လူဦးရေအတွက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းက။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်။ 1980; 62: 56-69 ။
Getz ll, Carter က CS ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ-vole မိတ်ဖက်။ နံနက် Scient ။ 1996; 84: 56-62 ။
Getz ll, Carter က CS, Gavish အယ်လ်အဆိုပါမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole Microtus ochrogaster ၏မိတ်လိုက်သည့်စနစ်: ဖျော်ဖြေမှုနဲ့ pair တစုံ-Bond ဘို့ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထား။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1981; 8: 189-194 ။
Getz ll, Hofmann je ။ အခမဲ့လူနေမှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, Microtus ochrogaster အတွက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းက။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1986; 18: 275-282 ။
Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှု (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience များအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ 2000; 114: 173-183 ။ [PubMed]
Gobrogge KL, လျူ Y ကို, Jia က X, pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျူးကျော်အတူဝမ် Z. anterior hypothalamic အာရုံကြော activation နှင့် neurochemical အသင်းအဖွဲ့များ။ J ကို comp Neurol ။ 2007; 502: 1109-1122 ။ [PubMed]
ဂရေဟမ် DL, Hoppenot R ကို, Hendryx တစ်ဦးက, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ကြွက်များတွင်ကင်းရာအရပ်ကို preference ကို၏စကားရပ်နှင့် reinstatement သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် modulate မှ D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor agonists ၏ differential စွမ်းရည်။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 719-730 ။ [PubMed]
Gruder-အဒမ်က S, Getz ll ။ Microtus ochrogaster နှင့် Mictrotus pennsylvanicus အတွက်မိတ်လိုက်စနစ်နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ J ကို Mammol ။ 1985; 66: 165-167 ။
Gutierrez PJ, Meyer JS, Novak MA ။ မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) နှင့်ထင်းရှူး voles အတွက် postnatal ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏နှိုင်းယှဉ် (Microtus Pinetorum) J ကို Mammol ။ 1989; 70: 292-299 ။
ဟမ်ဘာဂါ-ဘား R ကို, Eisenberg J ကို, Belmaker RH အ။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ် vasopressin သက်ရောက်မှု၏လက်တွေ့လေ့လာမှုများ။ Isr J ကို Med သိပ္ပံ။ 1987; 23: 12-18 ။ [PubMed]
ဟမ်ဘာဂါ-ဘား R ကို, Klein တစ်ဦးက, Belmaker RH အ။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ် vasopressin ၏နာတာရှည် vs. စူးရှသောဆေးထိုးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Peptides ။ 1985; 6: 23-25 ။ [PubMed]
EA ၏, Young က LJ ကြိုးပုခက်။ အဆိုပါ vasopressin V1a အဲဒီ receptor ကမကထနှင့်စကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲ: လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်မြတ်နှင့် intraspecific မူကွဲများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2002; 16: 399-402 ။ [PubMed]
EA ၏, Young က LJ ကြိုးပုခက်။ vole မျိုးစိတ်အတွက်မတူကွဲပြားလူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ် functional microsatellite polymorphic ။ Mol Biol Evol ။ 2004; 21: 1057-1063 ။ [PubMed]
Heimer L ကို, Zahm DS, Churchill L ကို, Kalivas PW, Wohltmann C. တိကျတဲ့ကြွက်များတွင် accumbal core နဲ့ shell ကို၏အနာဂတ်ပုံစံများဖြစ်သည်။ neuroscience ။ 1991; 41: 89-125 ။ [PubMed]
Hull က EM, Dominguez JM ။ အတူတူကသူ့လုပ်ရပ်ရယူခြင်း: အချိုမှု, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်, medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 1126: 66-75 ။ [PubMed]
Hull က EM, Dominguez JM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007; 52: 45-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hull က EM, Eaton RC, Markowski VP, မောရှေဂျေ, Lumley LA က, Loucks ဂျေအေ။ သုတ်ရည်ထိဘို့ဂယက်: လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုအပေါ် medial preoptic D1 နှင့် D2 receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1992; 51: 1705-1713 ။ [PubMed]
Hull က EM, Muschamp JW, Sato အက်စ် Dopamine နှင့် serotonin: အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 83: 291-307 ။ [PubMed]
Insel TR, Hulihan တီဂျေ။ pair တစုံဘွန်းများအတွက်တစ်ဦးကကျား, မ-တိကျတဲ့ယန္တရား: monogamous voles အတွက် oxytocin နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995a; 109: 782-789 ။ [PubMed]
Insel TR, Preston က S, Winslow JT ။ အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: အ monogamous အထီးအတွက်အဖော်ရှာ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995b; 57: 615-627 ။ [PubMed]
Insel TR, Shapiro LE ။ oxytocin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကထင်ဟပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1992a; 89: 5981-5985 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Insel TR, Shapiro LE ။ receptors နှင့်မိခင်အပြုအမူ oxytocin ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1992b; 652: 122-141 ။ [PubMed]
Insel TR, ဝမ် ZX, ကူးတို့ CF. microtine ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက် vasopressin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးပုံစံများ။ J ကို neuroscience ။ 1994; 14: 5381-5392 ။ [PubMed]
Jacobs LF, Gaulin SJ ဖြစ်သူရှယ်ရီ DF, ဟော့ဖ်မန်း GE ။ Spatial သိမှတ်ခံစားမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: Spatial အပြုအမူ၏လိင်-တိကျတဲ့ပုံစံများ hippocampal အရွယ်အစားခန့်မှန်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1990; 87: 6349-6352 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Jannett FJ ။ တစ်ဦးပါရာဒိုင်းအဖြစ် montane vole ၏လူမှုဒိုင်းနမစ်, Microtus montanus ။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်။ 1980; 62: 3-19 ။
Jannett FJ ။ လယ်ပြင်၌လူဦးရေအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ vole, Microtus montanus ၏အသိုက်ပုံစံများ။ J ကို Mammol ။ 1982; 63: 495-498 ။
Kendrick KM, Keverne eb, Baldwin BA ဘွဲ့။ Intracerebroventricular oxytocin ကိုသိုးများတွင်မိခင်အပြုအမူကိုလှုံ့ဆျော။ Neuroendocrinology ။ 1987; 46: 56-61 ။ [PubMed]
Kendrick KM, Keverne eb, Hinton MR, ကောင်းသောဂျေအေ။ oxytocin, parturition နှင့်နို့စို့စဉ်အတွင်းသိုးများ၏ stria terminalis ၏ medial preoptic ဧရိယာနှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဒေသတွင်း၌အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် monoamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 569: 199-209 ။ [PubMed]
ပက်ထရစ် B ကိုကင်မ် JW, Insel TR ။ အဖေဘက်ကအမူအကျင့်နဲ့ဆက်စပ်စကားရပ် fos Limbic system ကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 658: 112-118 ။ [PubMed]
Kleiman DG ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်စျမယား။ မေးဗြာ Biol ။ 1977; 52: 39-69 ။ [PubMed]
Landgraf R ကို, ဖရန့် E ကို, Aldag JM, နျူမန် ID ကို, SHARER, CA, Ren က X, Terwilliger EF, Niwa M က, Wigger တစ်ဦးက, Young က LJ ။ ကြွက် septum အတွက် vole V1a vasopressin အဲဒီ receptor ၏ viral vector-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်း: လူမှုရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်တက်ကြွသောလူမှုရေးအပြုအမူတိုးတက်လာသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 403-411 ။ [PubMed]
Levy က F, Keller က M, နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်မိခင်အပြုအမူ၏ Poindron P. Olfactory စည်းမျဉ်း။ Horm ပြုမူနေ။ 2004; 46: 284-302 ။ [PubMed]
Lim က MM, Murphy က AZ, Young က LJ ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) J ကို comp Neurol အတွက် Ventral striatopallidal oxytocin နှင့် vasopressin V1a receptors ။ 2004a; 468: 555-570 ။ [PubMed]
Lim က MM, ဝမ် Z ကို, Olazabal DE, Ren က X, Terwilliger EF, Young က LJ ။ တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက် Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝ။ 2004b; 429: 754-757 ။ [PubMed]
Lim က MM, Young က LJ ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံ Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience ။ 2004c; 125: 35-45 ။ [PubMed]
လျူ Y ကို, Curtis JT, Aragona BJ, လူမှုရေးနှင့် Non-လူမှုရေး voles ၏ဦးနှောက်ထဲတွင် dopamine neuroanatomy ၏ဝမ် Z. တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်။ prep ၌တည်၏။
လျူ Y ကို, Curtis JT, ဝမ် Z. Vasopressin ကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (Microtus ochrogaster) ပြုမူနေ neuroscience ထိန်းညှိ။ 2001a; 115: 910-919 ။ [PubMed]
လျူ Y ကို, မုဆိုး, CD, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့် montane voles ၏ forebrain အတွက်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏ဝမ် Z. Ontogeny ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2001b; 127: 51-61 ။ [PubMed]
လျူ Y ကို, ဝမ် ZX ။ နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 121: 537-544 ။ [PubMed]
Madison DM ။ radiotelemetry အားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles အကြားတွင်မျိုးပွားမှုဖြစ်ရပ်များ၏လပ်ြရြားမြရိပ်လက္ခဏာ။ J ကို Mammol ။ 1978; 59: 835-843 ။
Madison DM ။ Microtus pennsylvanicus ၏လူမှုရေးဇီဝဗေဒတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံအမြင်။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်။ 1980; 62: 20-30 ။
McGuire B, Novak MA ။ အဆိုပါမြက်ခင်း vole (Microtus pennsylvanicus), မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (အမ် ochrogaster), နှင့်ထင်းရှူး vole (အမ် pinetorum) Animation ပြုမူနေအတွက်မိခင်အပြုအမူ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ 1984; 32: 1132-1141 ။
McGuire B, Novak MA ။ မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့် montane vole အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကမှ၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ J ကို Mammol ။ 1986; 67: 305-311 ။
Missale ကို C, Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber M က, caron MG ။ Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol Revs ။ 1998; 78: 189-225 ။ [PubMed]
Mitchell က JB, အဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်၏ activation အားဖြင့်ရူးနှမ်း Gratton အေ Mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ်မြန်နှုန်းမြင့် chronoamperometric လေ့လာမှု။ neuroscience လက်တ။ 1992; 140: 81-84 ။ [PubMed]
Moriceau S က, Sullivan က RM ။ မွေးကင်းစကလေးပူးတွဲမှု၏ Neurobiology ။ dev Psychobiol ။ 2005; 47: 230-242 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နယ်လ်ဆင် RJ, ကျူးကျော်များ၏ Chiavegatto အက်စ် Molecular အခြေခံ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2001; 24: 713-719 ။ [PubMed]
နယ်လ်ဆင် RJ, Trainor ဘီစီ။ ကျူးကျော်များ၏အာရုံကြောယန္တရားများ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007; 8: 536-546 ။ [PubMed]
Neve Ka, Seaman JK, Trantham-Davidson အိပ်ချ် Dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ။ J ကို Reception Signal Transduct Res ။ 2004; 24: 165-205 ။ [PubMed]
Northcutt ကေဗွီ, ဝမ် Z ကို, Lonstein JS ။ အဆိုပါကြွက် olfactory ၏ tyrosine hydroxylase-synthesizing ဆဲလ်တွေအတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု amygdala တိုးချဲ့။ J ကို comp Neurol ။ 2007; 500: 103-115 ။ [PubMed]
Oliveras: D, Novak MA ။ အဆိုပါမြက်ခင်း vole, Microtus pennsylvanicus, ထိုထင်းရှူး vole, Microtus pinetorum နှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်, Microtus ochrogaster ။ Animation ပြုမူနေ။ 1986; 34: 519-526 ။
Pederson, CA, ရမ် AJJ ။ oxytocin ၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကညာကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူ၏ induction ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1979; 76: 6661-6665 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pitkow LJ, SHARER, CA, Ren က X, Insel TR, Terwilliger EF, Young က LJ ။ တစ်ဦး monogamous vole ၏ ventral forebrain သို့ receptor မျိုးရိုးဗီဇလွှဲပြောင်း vasopressin တို့ကဆက်နွယ်မှုနဲ့ pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏နည်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 7392-7396 ။ [PubMed]
Pizzuto T က, Getz ll ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) အိမ်ထောင်ဖက်ဆုံးရှုံးပြီးနောက်အသစ်တခု pair တစုံကိုဖွဲ့စည်းရန်ပျက်ကွက်။ ပြုမူနေ proc ။ 1998; 43: 79-86 ။
Seay B, Hansen အီး, Harlow HF ။ မျောက်များအတွက်မိခင်-မွေးကင်းစကလေးခွဲခြာ။ J ကိုကလေး Psychol Psychiat ။ 1962; 3: 123-132 ။ [PubMed]
ကိုယ်ပိုင် DW, Barnhart WJ, Lehman DA, Nestler EJ ။ D1- နှင့် D2 ကဲ့သို့ dopamine အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ဆန့်ကျင်ဘက်မော်ဂျူ။ သိပ္ပံ။ 1996; 271: 1586-1589 ။ [PubMed]
Shapiro LE, Insel TR ။ မွေးကင်းစကလေး၏လူမှုရေးခွဲခြာမှုအပေါ်တုန့်ပြန်မှုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြုအမူများကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်သည်။ Dev Psychobiol ။ 1990; 23: 375-393 ။ [PubMed]
Shapiro LE, Leonard CM, Sessions အီး, Dewsbury DA, Insel TR ။ monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လိင် dimorphic hypothalamus ၏နှိုင်းယှဉ် neuroanatomy ။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 541: 232-240 ။ [PubMed]
monogamous နှင့်ကရာ voles ၏ medial prefrontal cortex အတွက် binding Smeltzer MD, Curtis JT, Aragona BJ, ဝမ် Z. Dopamine, oxytocin နှင့် vasopressin အဲဒီ receptor ။ neuroscience လက်တ။ 2006; 394: 146-151 ။ [PubMed]
Stowe JR, လျူ Y ကို, Curtis JT, Freeman ကအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်-related တုံ့ပြန်မှုအတွက် ME, ဝမ် Z. မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု: လူမှုရေးအထီးကျန်၏ဆိုးကျိုးများ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86: 369-378 ။ [PubMed]
Szot P ကို, Dorsa DM ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ vasopressin ဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်အချိန်ကိုက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism Differential ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1993; 73: 177-183 ။ [PubMed]
Takahata R ကို, အ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏ Moghaddam ခပစ်မှတ်-တိကျတဲ့ glutamatergic စည်းမျဉ်း။ J ကို Neurochem ။ 2000; 75: 1775-1778 ။ [PubMed]
Tamarin R ကို, အယ်ဒီတာ။ နံနက် Soc Mamm အထူးအသေးစိတ်အရက်ဆိုင် 8 ။ 1985 ။ ကမ္ဘာသစ် Microtus ၏ဇီဝဗေဒ။
သောမတ်စ်ဂျာ Birney EC ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်မိတ်လိုက်သည့်စနစ်။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1979; 5: 171-186 ။
Tillerson JL, Caudle WM, မိဘ JM, Gong ကို C, Schallert T က, Miller က GW ။ အဆိုပါ dopamine Transporter ဒါမှမဟုတ် D2 dopamine အဲဒီ receptor ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ Olfactory ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလိုငွေပြမှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006; 172: 97-105 ။ [PubMed]
Volkmar FR ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက် Pharmacological ကြားဝင်: သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့ပြဿနာများကို။ J ကို Clin ကလေး Psychol ။ 2001; 30: 80-87 ။ [PubMed]
အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲတွင် vasopressin-immunoreactive လမ်းကြောင်းအတွက်ဝမ် Z. မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုနဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) နှင့်မြက်ခင်း voles အတွက် amygdaloid နျူကလိယ (Microtus pennsylvanicus) ပြုမူနေ neuroscience medial ။ 1995; 109: 305-311 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Aragona BJ ။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ Neurochemical စည်းမျဉ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 83: 319-328 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, De Vries GJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူနှင့် vasopressin immunoreactive စီမံချက်များအပေါ် testosterone သက်ရောက်မှု (Microtus ochrogaster) ဦးနှောက် Res ။ 1993; 631: 156-160 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Hulihan တီဂျေ, Insel TR ။ လိင်နှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအပြုအမူနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အာရုံကြော activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1997a; 767: 321-332 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, voles အတွက် Insel T. မိဘအပြုအမူ။ Adv လေ့လာမှုပြုမူနေ။ 1996a; 25: 361-383 ။
ဝမ် Z ကိုလျူ Y ကို, Young က LJ, Insel TR ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် binding forebrain vasopressin အဲဒီ receptor ပြောင်းလဲမှုများ (Microtus ochrogaster) နှင့် montane voles (Microtus montanus) အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997b; 807: 510-513 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, စမစ် W ကဗိုလ်မှူး DE, De Vries GJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ (Microtus ochrogaster) တွင် vasopressin တမန် RNA စကားရပ်များနှင့်မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) ဦးနှောက် Res အပေါ်တွဲပြီး၏ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု။ 1994; 650: 212-218 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Young က LJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့် montane voles အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် binding oxytocin နှင့် vasopressin အဲဒီ receptor ၏ Ontogeny ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1997c; 104: 191-195 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Young က LJ, De Vries GJ, Insel TR ။ Voles နှင့် vasopressin: pair တစုံဘွန်းနှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များ, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ prog ဦးနှောက် Res ။ 1998; 119: 483-499 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Young က LJ, လျူ Y ကို, Insel TR ။ မျိုးစိတ် vasopressin အဲဒီ receptor အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု binding အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထင်ရှားနေသောခေါင်းစဉ်: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့် montane voles အတွက်နှိုင်းယှဉ်ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများ။ J ကို comp Neurol ။ 1997d; 378: 535-546 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, ယု, G, Cascio ကို C, လျူ Y ကို, Gingrich B, Insel TR ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113: 602-611 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, Zhou L ကို, Hulihan တီဂျေ, Insel TR ။ အလယ်ပိုင်း vasopressin နဲ့ microtine ကြွက်များတွင် oxytocin လမ်းကြောင်း၏ Immunoreactivity: တစ်အရေအတွက်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1996b; 366: 726-737 ။ [PubMed]
Weller တစ်ဦးက, မွေးကင်းစအတွက် Feldman R. Emotion စည်းမျဉ်းများနှင့်ထိတွေ့: cholecystokinin နှင့် opioids ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Peptides ။ 2003; 24: 779-788 ။ [PubMed]
Williams က JR, Carter က CS, အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Insel တီ Partner preference ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတမိတ်လိုက်သို့မဟုတ် oxytocin ၏ဗဟိုပြုတ်ရည်များကလွယ်ကူချောမွေ့နေပါတယ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1992a; 652: 487-489 ။ [PubMed]
Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး: လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1992b; 26: 339-349 ။ [PubMed]
Williams က JR, Insel TR, Harbaugh CR, Carter က CS ။ ဗဟိုအုပ်ချုပ် oxytocin အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို (Microtus ochrogaster) J ကို Neuroendocrinol ဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ 1994; 6: 247-250 ။ [PubMed]
Wilson က SC ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အတွက်မိဘ-ငယ်ရွယ်အဆက်အသွယ်။ J ကို Mammol ။ 1982; 63: 300-305 ။
Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365: 545-548 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Rompre PP ။ ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ အမ်းဗြာ Psychol ။ 1989; 40: 191-225 ။ [PubMed]
Witt DM, Carter က CS, အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် binding Insel တီ oxytocin အဲဒီ receptor: Endogenous နှင့် exogenous oestradiol ဆွ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1991; 3: 155-161 ။ [PubMed]
ရှီ ZX, Stein EA ၏။ နျူကလိယထဲမှာ Vivo လြှပျစစျလေ့လာမှု mesolimbic ဂိဗာမွို့-တစ်ခု receptors များက dopamine လွှတ်ပေးရန်မော်ဂျူ accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 798: 156-165 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ ။ ဖရန့်အေသဲသောင်ပြင်ဆုချီးမြှင့်။ oxytocin နှင့် vasopressin receptors နှင့်မျိုးစိတ်-ပုံမှန်လူမှုရေးအပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 1999; 36: 212-221 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, Huot B, Nilsen R ကို, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ ကမကထပာ၏နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်: ဗဟို oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1996; 8: 777-783 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, Nilsen R ကို, Waymire ကီလိုဂရမ်, MacGregor ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Insel TR ။ တစ်ဦး monogamous vole ထံမှ V1a အဲဒီ receptor ဖော်ပြကြွက်တွေမှာ vasopressin တိုးမြှင် Affiliate တုံ့ပြန်မှု။ သဘာဝ။ 1999; 400: 766-768 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 1048-1054 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ မယား၏ Neuroendocrine အခြေစိုက်စခန်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1998; 21: 71-75 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, Waymire ကီလိုဂရမ်, Nilsen R ကို, Macgregor ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇ Transgene ကြွက်များတွင်တစ်ရှူး-တိကျတဲ့စကားရပ်ညွှန်ကြား၏5'' flanking ဒေသ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997a; 807: 514-517 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, Winslow JT, Nilsen R ကို, Insel TR ။ အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: monogamous နှင့် nonmonogamous voles အတွက် V1a receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1997b; 111: 599-605 ။ [PubMed]